IZITYALO ZANGAPHAKATHI EZISUSA ITYHEFU - UKUHOMBISA
Eyona Ukuhombisa Izityalo zangaphakathi ezisusa ityhefu
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwizityalo zangaphakathi ezisusa ityhefu ekhayeni lakho. Ungcoliseko lomoya lwangaphandle luchaphazela izigidi yonke imihla. Kumazwe amaninzi ahambele phambili kwezoqoqosho, ungcoliseko lomoya lukhulu kangangokuba lunokubangela imicimbi yezempilo eyoyikisayo. Abantu abakwizixeko ezikhulu badibana nemisi yemoto, umsi wecuba, imichiza kunye nokugcwala kwemizi-mveliso.
Ungcoliseko lomoya lubangela izifo ezininzi ezinokubulala. Iziphumo zongcoliseko lomoya nazo zinokubangela ukungachumi kunye nemiba yokukhula ebantwaneni. Kukho ukwanda kwinani lezifo zokuphefumla kunye nokusweleka okubangelwa ngulo moya ungcolileyo.
Into abantu abaninzi abangayiqondiyo kukuba ungcoliseko lomoya alupheleliselwanga ngaphandle. Ufunde ngokuchanekileyo. Nokuba kukhuseleko lwamakhaya akho, kukho ungcoliseko lomoya. Kukho imisi evela kwifenitshala yakho, ipeyinti, ukhuni, kunye namalaphu abangela ungcoliseko lomoya ngaphakathi.
Kutheni ufuna ityhefu ekunciphiseni izityalo zangaphakathi
I-NASA iqhube isifundo esibandakanya izindlu zendlu ukujonga indlela ezichaphazela ngayo umgangatho womoya wangaphakathi kwiindawo ezivaliweyo. Bayibiza ngokuba sisiFundo soMoya ococekileyo. Ngokusekwe kolu phononongo, kukho iindidi zezityalo ezingaphakathi endlwini ezinokucoca umoya kwaye ziphucule kakhulu umgangatho wazo. Kuqinisekisiwe ukuba umsi ovela kwinto esiyisebenzisa ngaphakathi endlwini uyichaphazela kakhulu impilo yethu.
utshata njani kwimo york entsha
Ungcoliseko lomoya lwangaphakathi lubangela i-migraines, ukucaphuka kwamehlo, isicaphucaphu, ukungezwani komzimba, isiyezi, kunye nokusilela kwelungu. Iziphumo zophononongo zibonisa ukuba kungcono ukuba ube nesityalo esinye kwisithuba seenyawo ezili-100 zekhaya okanye isithuba seofisi.
Umphunga weTrichlorethylene uvela kwii-inki, iipeyinti, iilacquers, ivanishi, izinto zokubambelela kunye nokususa ipeyinti. Kubangela isiyezi, intloko ebuhlungu, isicaphucaphu nokugabha.
Isafire eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nomsesane wedayimane
Omnye umphunga oqhelekileyo oyityhefu yi-formaldehyde. Lo mlilo uyityhefu uvela ezingxoweni zamaphepha, iphepha elixutywe ngetawuli, iitawuli zobuso, iithayile zetafile, iplywood kunye nelaphu elenziweyo. Iziphumo eziqhelekileyo zibandakanya ukucaphuka kwempumlo, umlomo kunye nomqala, kunye nokudumba kwemiphunga kunye nengqula.
I-Benzene ifumaneka kwiiplastiki, i-resins, i-fibre zokwenziwa, idayi, i-detergents, i-pesticides, umsi wecuba kunye nokuphelisa imoto. Kubangela ukucaphuka kwamehlo, intloko ebuhlungu, isiyezi, ukozela kunye nokudideka.
I-Xylene inokufumaneka kwipeyinti, umsi wecuba, iimveliso zesikhumba kunye nepeyinti, kunye nokuphuma kwezithuthi. Kuye kwaboniswa ukuba kubangele umlomo kunye nomqala, umsindo, intloko, ukudideka, iingxaki zentliziyo, ukulimala kwesibindi kunye nezintso ukubiza ezimbalwa.
Ngale nto engqondweni, nazi izinto ezindlini zangaphakathi ezinezifundo zesayensi eziqinisekisa amandla abo okucoca umoya.
Ikhala lineentlobo ezingaphezu kwama-500 ezahlukeneyo zezityalo ezineentyatyambo. Eyona idume kakhulu yialoe Vera okanye ikhala eliyinyani elisetyenziselwa iinjongo zamayeza. Ikwayinto eqhelekileyo kwimveliso yeenwele ngenxa yokukwazi ukondla isikhumba sentloko kunye neenwele.
IAloe yinzalelwane yeAfrika, eMadagascar, kusingasiqithi waseArabhiya nakwiziqithi ezikulwandlekazi lwaseIndiya. Kuqatshelwe ukuba i-aloe yonyusa amanqanaba eoksijini xa ibekwe ngaphakathi. Ithatha umsi onetyhefu njenge-formaldehyde, icarbon dioxide kunye nekhabhon monoksayidi. Enye imbiza yekhala ilingana neefilitha zomoya zebhayoloji, ezenza ukuba ibe sisityalo esisebenzayo nesisebenzayo.
Isigcawu saziwa ngamanye amagama afana nesityalo senqwelomoya, inyibiba yaseSt.Bernard, inyibiba yesigcawu, iribhoni, nenkukhu neenkukhu. Sisityalo esidubula iintyatyambo esizalwa emazantsi eAfrika.
utshata njani ma
Isityalo esithandwa kakhulu ngenxa yokuba kulula ukukhula kwaye sidinga ukukhanya kwelanga. Ifunxa iityhefu ezinjenge-formaldehyde, icarbon monoxide, kunye ne-benzene.
I-English Ivy ikwabizwa ngokuba yi-ivy eqhelekileyo okanye i-ivy yaseYurophu. Sisityalo esidubula iintyatyambo esivela eYurophu nakwintshona yeAsia.
Ngumdiliya onamathelayo ohlala uluhlaza onokuhlala ufumaneka ezindongeni, kwiingcingo, nasemithini. Ngoku ilinywa njengesityalo sokuhombisa.
Izicatshulwa zesityalo zisetyenziselwa iinjongo zonyango ngokukodwa ukukhwehlela. I-English Ivy yaziwa ngokukwazi kwayo ukufunxa ama-60% okanye ukungunda okubangelwa ngumoya kunye ne-58% yelindle elisemoyeni kwisithuba seeyure ezingama-6 libekwe kwigumbi.
pant pant yomama womtshakazi
Kukho iintlobo ezingaphezu kwama-40 zesi sityalo sidubulayo. Iinyibiba zoxolo zizalelwa eMelika nakuMzantsi-mpuma Asia. Ihlala ngcono kwiindawo ezinomthunzi ezenza ukuba ibe sisityalo esihle endlwini. Ifuna amanzi kube kanye ngeveki ukuqinisekisa ukuba umhlaba ufumile. Icoca i-benzene, trichlorethylene, kunye ne-formaldehyde.
Esi sityalo saziwa ngamanye amagama anje ngolwimi lukamamazala kunye nehipp's bowstring hemp. Luhlobo lwesityalo esineentyatyambo esizalelwa eNtshona Afrika. Iyalinywa njengesityalo sokuhombisa. Ngokusekwe kuNASA yoFundo loMoya ococekileyo, isityalo senyoka sisusa ngempumelelo i-4 kwezi-5 iityhefu ezisemoyeni.
Ukuba ulonwabele eli nqaku kwaye ufuna ngaphezulu, jonga iphepha lethu malunga ukukhula kwezityalo zomoya Apha.
Iidillard zomtshato womama womtshakazi
(1) nditsho ukusuka Wikimedia (Creative Commons License)
(Mbini) epibase ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
(Mbini) mnemo ukusuka Wikimedia (Creative Commons License)
ziziphi iinzuzo zomtshato
imibuzo oza kuyibuza umfoti wakho womtshato
imihombiso yegumbi lokutyela yale mihla
Isipho seminyaka engama-60 somtshato
elifutshane kunye nothando olumnandi
isiko lomtshato kwihlabathi liphela